Iselula / Whatsapp / Wechat: 0086-13933032315
Isilawuli Sokukhula Kwezitshalo
Ungayisebenzisa kanjani kahle iDifenoconazole correctly
I-Difenoconazole isetshenziselwa ukufafaza ezihlahleni zezithelo, kanti ukufafaza ngaphambi noma ekuqaleni kwesifo kunomphumela omuhle kakhulu wokuvikela nokulawula. Izifo zeCitrus zifuthwa cishe izikhathi ezi-2 esikhathini ngasinye sokukhula kwentwasahlobo, isikhathi sokukhula kwehlumela ehlobo, intsha ...
Ukusebenza kahle okuphezulu, Ubuthi obuphansi, i-Broad-spectrum fungicide-Difenoconazole
I-Difenoconazole iyindlela esebenza kahle kakhulu, ephephile, enobuthi obuncane, isibulali-fungicide esibanzi, esingadonswa izitshalo futhi sibe nomthelela oqinile we-osmotic. Futhi umkhiqizo oshisayo phakathi kwesikhunta. Ngokuchitha ukuhlanganiswa kodonga lweseli lamagciwane, kuphazamisa ...
Eminyakeni emibili edlule, abalimi abaningi bemifino batshale izinhlobo ezingamelana namagciwane ukuze kuvinjelwe ukuvela kwezifo zegciwane lotamatisi. Kodwa-ke, lolu hlobo lohlobo lunento eyodwa olufanayo, okungukuthi, alunamandla okumelana nezinye izifo. Ngasikhathi sinye, lapho abalimi bemifino ngokuvamile ...
Isilawuli sokukhula kwezitshalo DA-6
IDiethyl aminoethyl hexanoate (DA-6) isilawuli sokukhula kwesitshalo esibanzi esisebenza ngemisebenzi eminingi ye-auxin, i-gibberellin ne-cytokinin. Iyancibilika emanzini nakwizinyibilikisi eziphilayo ezinjenge-ethanol, ketone, chloroform, njll. Izinzile kwisitoreji ekamelweni lokushisa, izinze ngaphansi kokungathathi hlangothi futhi ...
I-thiamethoxam vs imidacloprid
Ukuze kuncishiswe umonakalo odalwe yizinambuzane ezitshalweni, sikhiqize isibalo esikhulu semithi yokubulala izinambuzane ehlukene. Indlela yokusebenza kwezinambuzane ezahlukahlukene iyafana, ngakho-ke sizikhetha kanjani lezo ezilungele izitshalo zethu? Namuhla sizokhuluma ngama-insecticide amabili ...
I-HEBEI ENGE BIOTECH CO., LTD.
Cha. 158, iHuaian East Road, Isifunda iYuhua, iShijiazhuang, China